ICathedral of Justo eMejorada del Campo, Impahla Yezintshisekelo Zamasiko? | Izindaba Zokuhamba
ICathedral of Justo eMejorada del Campo, Impahla Yezintshisekelo Zamasiko?
Maria | | Izaziso, Yini ongayibona
Kusukela etsheni lokuqala elabekwa ngo-Okthoba 1961 ngosuku lweVirgen del Pilar kuze kube namuhla, umhlaba umangele ngetshe ngalinye eliphakanyiswe nguJusto Gallego ukwakha isonto lakhe elikhulu elenziwa ngezinto ezenziwe kabusha. Ekwakhiweni unomphela isikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka futhi ngaphandle kwezinhlelo, amalayisense okwakha noma amaphrojekthi wezobuchwepheshe, iCathedral of Justo ibihlala nomoya wokubhidlizwa.
Ukwesaba omakhelwane nezivakashi ngaphambi kokuvaleliswa kwethempeli ngosuku lapho umakhi walo engekho kudale ukusabela kokuqala.
Onke amaqembu ezepolitiki abekhona engqungqutheleni yomkhandlu wedolobha avumile isiphakamiso esethulwe yiqembu le-UPyD sokuba semthethweni kwethempeli laseJusto kanye nokuvikelwa kwalo njengeMpahla Yezintshisekelo Zamasiko. Ukusuka lapha kukuhulumeni kamasipala ukuqoqa yonke imibhalo edingekayo nokulungisa imibiko nezinhlelo zokuqala ifayili.
Ngaphandle kwamaphepha nokwamukelwa njengeMpahla Yezintshisekelo Zamasiko, uJusto Gallego kusobala ukuthi i-cathedral ingaphezulu nje kwendawo yokuvakasha. FUTHIYithempeli lomkhuleko elizinikele kwiVirgen del Pilar kodwa okokuqala kufanele liqedwe futhi ligunyazwe ngokusemthethweni ukunikeza imisa.
1 Iphupho lomuntu
2 Ukwazi iphrojekthi yakho
3 Yini ezolandela ngokulandelayo?
4 Likuphi ikhatholika laseJusto?
Indaba kaJusto Gallego yindaba yokholo nomzamo wokufeza iphupho. Ngo-1925 wazalelwa eMejorada del Campo futhi, ngenxa yezinkolelo zakhe eziqinile, wanquma ukuchitha ubusha bakhe esigodlweni sezindela saseSoria María de Huerta. Isifo sofuba sanciphisa izinhlelo zakhe futhi kwadingeka asishiye esaba ukutheleleka okukhulu.
Wakwazi ukunqoba ukugula ngemuva kwesikhathi kodwa waqala ukucindezeleka ngoba leso siqephu sasinciphisa isifiso sakhe sokuzinikela empilweni yenkolo. Kodwa-ke, uNkulunkulu wayenamanye amacebo ngaye. Isisho esidumile sithi izindlela zeNkosi azichazeki nakuma-60s, UJusto Gallego uthole enye indlela yokwenza impilo yakhe ibe nenjongo: ukwakha isonto lombhishobhi elinikezelwe eVirgen del Pilar edolobheni lakubo.
Into emangazayo ngomlando wakhe ukuthi ngaphandle kokuba nolwazi lokwakhiwa kwezakhiwo noma ukwakhiwa waqala ukwakha isonto lakhe elikhulu epulazini lesakhiwo sakhe. Ikhuthazwe ngokukhethekile ngamasonto amakhulu abawabona ezincwadini eziningi zobuciko.
Ubethengisa izinto zakhe ukuze akhokhele izindleko zokuthengwa kwezinto kuze kuphele. Kamuva waqhubeka esebenzisa izinto ezenziwe kabusha futhi ngosizo lwabantu kanye nezinkampani ezinentshisekelo kuphrojekthi yakhe.
Ukwazi iphrojekthi yakho
Njengamanje iCathedral of Justo eMejorada del Campo ithatha indawo engamamitha-skwele angama-4.740 ngezilinganiso ezingakholeki: amamitha angama-50 ubude nobubanzi obungu-20 nokuphakama kwamamitha angama-35 kuze kufike ezindlini. Inemibhoshongo emibili engamamitha angama-60 nazo zonke izici zesonto elikhulu lamaKatolika: i-altare, i-cloister, i-crypt, izitebhisi, ingilazi enamabala, njll.
Njengokungathi lokho bekunganele, leli thempeli liyisibonelo sokuzibophezela emvelweni ngoba ingxenye enkulu yezinto ezisetshenzisiwe ekwakhiweni kwayo ivela emikhiqizweni eyenziwe kabusha yanikelwa yizinkampani zokwakha ezisendaweni.
Ngokuphikisana nalokho abaningi abakholelwa kukho, ithempeli elikhulu laseMejorada del Campo namuhla liyindawo eyimfihlo, hhayi elomphakathi. Kodwa-ke, uJusto uvula iminyango ukuze labo abanentshisekelo ngomsebenzi wakhe bawucabangisise eduze futhi, uma bethanda, banikele ngeminikelo emincane.
Yini ezolandela ngokulandelayo?
Okwamanje, ukusinda kwe-Mejorada del Campo Cathedral ngemuva kokushona komakhi wayo kuyindida yize kubukeka sengathi umkhandlu wedolobha ubeke uhlelo lokuyiguqula ibe yi-Site of Cultural Interest.
Kunoma ikuphi, labo abangenele udaba lwakhe eminyakeni edlule bathi ngemuva kokushona kukaJusto, bazolwela ukufeza iphupho lakhe. Ngokwakhe, uJusto uyakuqinisekisa ukuthi wakhe isonto lakhe elikhulu lokukhazimulisa uNkulunkulu nokuthi uzizwa ejabule ngalokhu asekwazuzile empilweni yakhe.
Likuphi ikhatholika laseJusto?
Ku-Calle Antonio Gaudí s / n eMejorada del Campo (Madrid). Ukusuka eMadrid ungafika lapho ngemoto cishe isigamu sehora. Indawo yokungena kuyo ayikhokhelwa kepha iminikelo yamukelwa ukuze uyiqede. Amahora kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusukela ngo-09: 00 ekuseni kuya ku-18: 00 ntambama nangoMgqibelo kusukela ngo-09: 00 ekuseni kuya ku-16: 00 ntambama. AmaSonto namaholide kuvaliwe.
Noma yimuphi umuntu, okholwayo noma ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, okwaziyo ukubona umzamo nokuqina kwaleli khehla elithobekile uzokujabulela ukucabanga ngale phrojekthi emangalisayo yobukhulu obukhulu obekuyiminyaka engaphezu kwengu-XNUMX eMejorada del Campo edelela ukuhamba kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izaziso » ICathedral of Justo eMejorada del Campo, Impahla Yezintshisekelo Zamasiko?
IHuanglong, amachibi anemibala ehlukahlukene kanye namagugu omhlaba
ISephardic Museum yaseToledo, uhambo olubheke emasikweni amaJuda aseSpain